Maxaa Sabab Uu Ah Khilaafka Uu Dhexeeya Wasiirka Biyaha Somaliland Iyo Agaasimaha Guud Ee Wasarada Biyaha
Sunday February 10, 2019 - 23:16:24 in Wararka by Wariye Khaliil Barre
Mudane, Hadaba waxaan jeclahay inaan halkan idiinku soo gudbiyo warbin taxane ah oo xaqiiqa kana jira Wasaaradda Horumarinta Biyaha. hadaba sida ku cad warqada lifaaqa ee halkan ku lifaaqan,
waxaa in muda ahba jirtay in khilaaf xoogani ka dhaxeeyey Agaasimaha Guud ee Wasaarada Jamaal Cabdi Muuse iyo Wasiirka Wasaaradda Saleeban Yuusuf Cali (Koore). khilaafkaas oo ka bilaabmay mashaariic Wasaaradda ka socota iyo agaasime waaxeedyo ay agaasimaha guud isu beel yihiin oo isu xulafaystay Wasiirka Wasaaradd Biyaha. Marka Laga yimaado Khilaafyadaas hore u dhacay
waxaa jirtay in shalay Ha’yada UNICEF ay soo shubi rabtay lacag loogu talo galay in qorshe howleed (Strategic Plan) loogu sameeyo Wasaaradda 5 sano ee soo socoto lacagtaas oo dhan $77,000. Arintu markay halkaan marayso waxa dhacday in Wasiirku lacagtii amar ku bixiyo in la soo mariyo shirkad khaas loo leeyahy (Private company)
halkii accounka Wasaaradda lagaga shubi lahaa shirkadaa oo la yidhaa Caalami Construction Company. Ka dib markii arintaas dhacday ee uu Agaasimaha Guud ogaaday ayaa waxa uu agaasimaha guud isaguna go'aansaday in waxii lacaga ee laga saarayo accounada wasaaradda oo sharci ahaan ay wada saxeexaan
Wasiirka iyo Agaasimuhu. in uu diiday dhinaciisa in uu agaasimu saxeeso jeegagii lacagaha lagula bixi lahaa maadaama uu Wasiirku lacagtii 77,000 ee dolar ahayd uu shirkada kale accounkeeda ku shubay. Intaasi markii ay dhacday waxaa kale oo jirta in maalin dhawayd uu Axmed Muumun Seed wasiirka wasaaradda Beeruhu dhexdhexadiyey taasi oo u eeg in ay soo afjarantay hadda.
Si kastooy ahaataba waxaa jira waxyaabo badan oo masuuliyad daro ah oo agaasimaha iyo wasiirka mid waliba dantisa ka raadinayo ka dantiisa ka dhex waayaan takale xanibayo. Ugu dambayntii waxaa jirta in maanta oo ay taariikhdu tahay 9/02/2019 uu Wasiirku soo saaray laba wareego oo midina soomaali taahay midina English taasi oo uu Wasiirku gabi ahaanba shaqadii kaga joojijey Agaasimihii Guud sida ku cad lifaaqa. waxaa ka mida waxyaabaha kale ee ka dhex jira wasaarada arimahan
1.	In dhamaan shaqaalihii hore ee waayo araga ahaa shaqada laga fadhiisiyey taasi soo habsami socodkii shaqada ragaadisay.
2.	waxaa jirta in Agaasime waxeedyadada hada shaqeeya lagu qaybiyey hab qabiil oo ah qabiilka Wasiirka iyo Qabiilka Agaasimaha. taasi oo sobobtay in marka Agaasimaha iyo Wasiiru is qabtaan ay hadba dhinac lakala saftaan.
3.	waxaa iyadun jirta oo kale oo khilaafka sii siyaadisay markii dhawaan mashuura Bangiga Aduunku uu soo saaray shaxda uu ku qaybinayey 14,000,000 oo dolar oo uu ugu deeqayo wasaaradahan: A. Wasaaradda Deegaanka = 5,000,000 oo dalar B. Wasaarada Beeraha = 3,000,000 oo dolar C. Xanaanada Xoolaha = 2,000,000 oo dolar D. Wasaaradda Qorshaynta = 2,000,000 oo dalar D. Haayada Aafooyiniak = 1,000,000 oo dalar E. Wasaaradda Biyaha = 1,000,000 oo dalar Qoondadan uu bangiga aduunku lacagta ku qaybiyey oo uu wasiirku ka biyo diiday ka dib markii ay Wasaaradda Biyuhu noqatay haayada ugu hoosaysa lacagta uu bangiga aduunku bixinayo,
taasi oo masuuliyiintii ka socday bangiga aduunku ku sabobeeyeen isfahan la'aan iyo khilaaf ka dhexeeya Agaasimaha iyo Wasiirka Biyaha. Iyada oo Agaasimaha iyo Wasiirka ay laba kooxood midba dhinaciisa ka soo magaacabay. Taasi oo sobobtay in masuuliyiinta bangigu gabi ahaanba hakiyaan wada shaqaynta wasaaradda iyo labada dhinac ee is hayaba.
4.	Waxaa kale oo jirta mashaariic badan oo socotay oo ay ka tagtay dowladii hore iyaga oo aan dhamaan oo gabi ahaanba u muuqda inay fashil ku dhowyihiin.
5.	Waxaa kale oo jirta in dhawaan adeega biyaha laga hirgaliyey magaalada Wajaale oo hada qasabado biyood la galiyey iyada oo magaalada laga hirgaliyey 5 kiyoos oo biyaha laga dhaansado. Hadaba waxaa jirta lacagta ka soo xeroota biyaha Wajaale in uu Wasiirku u samaystay Acccount gaaara oo uu isagu shaqsiyan u leeyahay.
Arintanani waxay ka dhex abuurtay agaasimaha iyo Wasiirka khilaaf aad u xoogan iyo kalsooni daro. Waxaa kale oo jira labada masuuul ee Wasaradda Biyaha ay kala sameysteen laba shaabood oo aan waafaq sanayn sharciga Soomaliland. Waxaa muuqata in masuuliyiintan ayna matalin danta umada reer Somaliland